Bogga internetka dowlada www.manskligarattigheter.se ayaad ka akhrisan kartaa in kale oo ku saabsan xuquuqda aadanaha.
Baarlamaanka ayaa waxuu sanadkii 2006 go'aamiyay in hadefka guud ee laga leeyahay siyaasadda sinnaanta ee Iswiidhan ey tahay in ragga iyo dumarka ey heystaan isku awood iyo fursado siman eey ku saameyn karaan bulshada iyo noloshooda. Hadefka guud waxaa loo kala qaaday afar hadefyo yaryar ah:
Awood qeybsi siman oo eey ragga iyo dumarka u simanyihiin heystaanna fursado siman oo ey ku noqon karaan muwaadiniin firfircoon iyo ineey meeleynayaan shuruudaha go'aan gaarista.
Sinnaan dhaqaale oo siinaya dumarka iyo ragga xuquuq iyo shuruudo siman ee waxbarasho iyo shaqo mushaar leh taasoo siineysa xurriyad dhaqaale inta ey noolyihiin.
In dumarka iyo ragga ey si siman u qeybsanayaan shaqooyinka aan lacagta leesku siin iyo shaqooyinka xanaanada, iney mas'uuliyad siman iska saaraan shaqada guriga iyo iney heystaan fursado siman oo ah helidda iyo siinta xanaaneynta iyagoo isku jid u maraya.
In kufsiga ragga eey u geysanayaan dumarka la joojiyo. Dumarka iyo ragga, gabdhaha iyo wiilasha, waa ineey helaan xuquuq iyo fursado siman oo ah badbaadada jir ahaaneed.